On nov 12, 2019 6 445
Tafiditra amin’ny fiarovana ny zon’ny zaza, indrindra ireo efa tafiditra anatin’ny fikirakirana ny Internet, nisy ny faha- enina sy faha-fiton’ny volana novambra lasa teo ny fampahafantarana tamin’ny mpanao gazety ny zava-misy mikasika izany, sy ny fomba ho enti-misoroka izany. Niarahana tamin’ny Unicef Madagasikara, ny Minisiteran’ny mponina ( MPPSPF), ny Minisiteran’ny fitsarana, sy ny sampandraharahan’ny polisy misahana ny Cybercriminalité, ary ny ARTEC izany.
Nampahafantarina ny mpanao gazety ny andraikitra sahanin’ireto mpiantsehatra voalaza teo ambony ireo. Niaraha-nijery koa ny karazana herisetra mety mahazo ny ankizy. Teo koa ny fanazavana, ny dingana maro samihafa amin’ny andraikitr’izy reo.
Tanjona tamin’ny fampiofanana, ankoatra ny fiaraha-mientan’ny rehetra, ny mba hampihena na tsy hisian’ny herisetra ateraky ny internet amin’ny ankizy. Ezahana ny mba tsy hahavoasarika ny ankizy amin’ny velam-pandriky ny olon-dratsy.
Nisy ny fepetra noraisina, efa nahitam-bokany rahateo. Anisan’izany ny fananganana ny Cyber-café sakazain’ny ankizy (Cyber ami des enfants). Ezaka niarahan’ny UNICEF sy ny Ministeran’ny mponina sy fiahiana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy na MPPSPF.
Ny taona 2016, tompona Cyber sy mpiandraikitra ny Cyber cafe miisa 16 no nandray anjara tamin’ny fivoriana ka 4 no nanaiky ampihatra sy nanao sonia ny sata fiarovana ny ankizy amin’ny internet.
Nahatratra 10 ny Cyber-café vao nisokatra no nanao sonia tamin’ity taona ity. Ny Cyber nanaiky ny sata fiarovana ny Ankizy, dia ahitana ny petan-dridrina. Misy koa ny solosaina manokana ho an’ny Ankizy latsakin’ny 15 taona.
“ Voatokana ny solosaina ampiasain’ny ankizy latsakin’ny 15 taona. Efa misy fomba fanakanana tsy ahafahan’ny Ankizy mijery zavatra mamoafady amin’ny internet. Anisan’izany ny fanasiavana ny internet. Raha misy Ankizy, tsy manaiky ampiasa ny solosaina voatokana, alefa mody avy hatrany ka averina ny volany. Miteraka fatiantoka ho anay izany, saingy tsy olana fa tombontsoan’ny Ankizy sy fiarovana azy ireo no tsinjovina. Olana anefa, misy ny Cyber, tsy nanao sonia ny sata no manome malalaka ireo Ankizy hanao izay tiany atao ao amin’ny cyber.”, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny Cyber- Ami des enfants, Hyacinthe Ramaroson, ao Toamasina.
Ho an’ny Minisiteran’ny mponina, nisy vokatsoa azo tsapain-tanana. Anisan’izany ny fitombon’ny fikambanana, vonona hiara-hiasa: tale-tsekoly , antokom-pivavahana , tomponandraikitry ny fikambanana. Ny Ray aman-dreny koa, mandray anjara amin’ny fanatsarana tokony atao hisorohana ny loza mety ho azo ankizy amin’ny fampiasana ny internet.
ACMIL ANTSIRABE: LASAN’NY EKIPAN’NY ENSOA NY AMBOARAN’NY TOURNOI INTER-CORPS RM1